Toogasho ka dhacday Suuqa Bakaaraha & faah faahin laga helay - Awdinle Online
Toogasho ka dhacday Suuqa Bakaaraha & faah faahin laga helay
Faah faahino ayaa laga helayaa Kooxo ku hubeysnaa Bastoolado oo qeyb kamid ah Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho ku dilay Askari ka tirsnaa Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dilkaas ayaa sigaar ah uga dhacay qeybta Cabdalle Shideeye ee Bakaaraha, waxaana ragga hubeysan ay Askariga ku toogteen xili uu halkaas ku sugnaa, iyagoona qeybta sare ee jirka rasaas uga dhuftay.
Ragii ka dambeeyay falkaas ayaa goobta uga baxsaday luuq yar oo halkaas ka Agdhawaa, isla markaana waxaa sida caadada aheyd diiqiiqado kadib tegay goobta Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in markii uu dilka dhacay kadib laga kala cararay qeybta Cabdalle Shideeye ee Suuq Bakaaraha, hayeeshee haatan xaaladda ayaa si caadi ah kusoo laabatay, sida sheegeen dad ku sugan Suuqa.
Suuqa Bakaaraha ee Magaaladav Muqdisho ayaa waxaa horey uga dhacay dilal ay geysteen rag dhalinyaro ah oo ku hubeysnaa Bastooado, waxaana dorraad gudaha Suuqaas lagu dilay Sarkaal ka tirsnaa Ciidanka Canshuurta qaada ee loo yaqaano minishiibiyada.
Previous articleMaxkamadda Ciidamada oo xukuntay Sarkaal Shabaab ah & Darawalkiisa
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed ugu….